Shiinaha Graphite Rod & Kaarboonka Ulaha warshad iyo alaableyda | Hexi
Ulaha garaafka ee ay soo saartay Shirkadda Hexi Carbon waxay leeyihiin habsami koronto oo wanaagsan, kuleylka kuleylka, saliidaynta iyo xasilloonida kiimikada. Ulaha garaafku way fududahay in la farsameeyo oo raqiis ah, waxaana loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan: mashiinada, metallurgy, warshadaha kiimikada, shubista, aaladaha aan fiicnayn, dhoobada, semiconductors, daawada, ilaalinta deegaanka iyo wixii la mid ah. Inta badan ulaha garaafka ee ay soo saarto shirkaddeena waxaa macaamiisha u adeegsadaan qaybaha kuleylka korontada ku shaqeeya ee kuleylka kuleylka leh ee heerkulka sare. Caabbinta heerkulka sare, heerkulka ugu sarreeya ee shaqeynaya wuxuu gaari karaa 3000 ℃, iska caabbinta kuleylka iyo iska caabbinta qabow, isugeyn ballaadhinta kuleylka yar, isuduwaha kuleylka ee korantada iyo adkeysiga (8-13) × 10-6 Ω m.
Ulaha garaafka ee aan soo saarno waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
1. Caabbinta heerkulka sare: barta dhalaalaysa 3850 ℃ 50 ℃
2. Cadaadiska shoogga ee kuleylka: Waxay leedahay caabbinta shoogga kuleylka oo wanaagsan iyo isugeyn yar oo ballaadhinta kuleylka ah, sidaas darteed waxay leedahay xasillooni wanaagsan
3. Kuleylka iyo kuleylka korantada wanaagsan. Kuleylka kuleylka ayaa 4 jeer ka sarreeya kan birta birta ah, 2 jeer ka sarreeya kan birta kaarboon ah iyo 100 jeer ka sarreeya kan aan caadiga ahayn
4. Lubricity: ubucda ul graphite waxay la mid tahay tan molybdenum disulfide, isku dheelitirka khilaafku wuu ka yaryahay 0.1, nuuciisu wuxuu ku kala duwan yahay cabirka cabirka. Isugeynta way sii weynaataa, isuduwaha khilaafku wuu yaryahay wuxuuna sii fiicnaanayaa saliidda
5. Xasiloonida kiimikada: Graphite wuxuu leeyahay xasilooni kiimikaad oo wanaagsan heerkulka qolka waana iska caabbinta aashitada, alkaliska iyo dareeraha dabiiciga
Kaarboon Hexi waxay leedahay awood wax soo saar xoog leh oo ah garaaf garaac / ul kaarboon. Marka loo eego codsiyada macaamiisha kala duwan, waxaan bixinnaa cabirro goyn loo habeeyay, oo soo saari kara ulaha garaafka | dhejiska kaarboon ee buuxiya shuruudahaaga, oo leh dhexroorro u dhexeysa 50 mm ilaa 1200 mm.
Xiga: Xannibaadda Garaafka & Garaafka Cubeyda